“Siyaasaaf Hidhaman, Shakkiin Jedhu Jiraachuu Mala. Garuu Dhara”
Caamsaa 17, 2013
Aangawootaa Mootummaa sadarkaa ol’aanaa fi daldaltoota beekamoo malaammaltummaatti shakkamanii turban jalqbaa baatii Caamsaa bara 2013 irra hidhaman irratti ka ragaalee walitti-qabataa turee fi amma himannaa irratti dhiheesse Koomishana Naamusaa fi Farra-malaammaltummaa ti.
Kan Koomishinicha ol’aantummaan hoogganan - Koomishinar Alii Usmaan Koomishinichi, aangawoota malaammaltummaan ennaa himatu kun ka jalqabaa akka hin ta’iin dubbatanii himannaan amma dhihaate kun, hordoffii fi qornnaa waggoota lamaa fudhachuu isaa dubbatu.
Hidhamuu aangawootaa fi daldaltootaa, ka gidduu kanaa ilaalchisuun yaadawwan kallattii adda addaatiin dhihaataa jiran, “aangawonni sadarkaa guddaa akkanaa irra jiran gama kaanaan mallattoo xiqqoodhuma iyyuu yoo agarsiisan, shakkidhumti iyyuu yoo irra jiraate yoo xiqqaate akkamitti taayitaa isaanii irra akka turan taasisame? Maaliif waggaa lama fudhate?” - jedhu. Kanaaf Koomishinarri Koomishina Naamusaa fi Farra-kachachalaa - Obbo Alii Sulemaan ennnaa deebisan, waggaa lama ka fudhateef sababaan tokko ragaa dha. Namoota shakkuun qofa otuu ragaa ga’aa irratti hin argatiin hidhuun sirrii miti. Dafanii taayitaa irra nama buusuunis faayidaa hinb qabu’ jechuun ibsan.
Gara waggaoota kudha-lamaa tii booda, Obbo Siyyee Abrahaa faa -- malaammaltummaatti shakkamanii, isaanii fi Obboleessi isaanii ennaa to’annaa jala oolanitti Ewehaat yokaan Adda Bilisummaa Uummata Tigiraay keessatti addaan-qoodaminsi uumamee jira. Isaan ejjennoo Polotikaatiin faallaa dhaabachuu isaaniitiin tarkaanfiin irratti fudhatame - kanneen jedhan, “tarii tarkaanfiin ammaas Paartiilee Miseensota EHAADEG ta’an gidduutti yokaan namoota Polotikaa dhuunfaa gidduutti wal-dhibdeee uumame irraa ka’ee ka fudhatame ta’uu mala” - shakkii jeddhu qaban jechuun, gabaasaan keenya Koomishar Alii Sulemaaniif gaaffii dhiheessee ennaa deebisan, “kun dhara. Yeroo Obbo Siyyeefaa ani waanan hin turiiniif homaa jechuu hin danda’ama. Tarkaanfiin amma fudhatame garuu, siyaasa hin qabu. Namoonni shakkanii gaafachuu malu. Garuu, dhara” jedhan.
Koomishichi Naamusaa fi Farra-Malaammaltummaa tarkaanfii haqa irratti hundaa’e fudhachuu fi dhiisuu isaa kan nuti amannu, yoo tarkaanfichi itti fufinsa qabaate - jedhu - hoogganoonni Paartiilee mormitootaa.
“Mormitoonni jedhanis dhiisanis. kun hojii guyyaa tokkoo miti. Duulas miti. Waan sirna isaa eegee hojjetamu. Itti-fufees hojiidhuma wal-fakkaataa tu hojjetama” - jedhan - Koomishinarri Koomishina Naamusaa fi Farra-malaammaltummaa, Obbo Alii Sulemaan.
Kanneen gidduu kana to’annaa jala galfaman - aangawoonni sadarkaa ol’aanaa fi daldaltoonni -- Mana-murtii Ol’aanaa Federaalaa Dhaddacha Yakkaa lammaffaatti dhihaachuun isaanii ni yaadatama. Dhimmi isaanii galmeelee sadiitti qoodamee kan ilaalamaa jiru yoo ta’u --- Keessummaa, kanneen galmeelee lama keessa galfaman - namoonni 19, guyyaa kudha afurii booda akka dhihaatan ajajamee jira. Sababaan isaa -- Qorattoonni Koomishina Naamusaa fi Farra-Malaammaltummaa ragaalee dabalataa walitti-qabachuuf akka yeroo isaan barbaachisu waan gaafataniifi, jedha gabaasaan keenya.